Itoophiyaatti dubartiin 'nama ajjeeste' jedhamuun ragaa sobaan hidhaan waggaa 20 itti murtaa'e bilisa bahuuf -BBC Afaan Oromoo - ETHIOPIANS TODAY
Itoophiyaatti dubartiin ‘nama ajjeeste’ jedhamuun ragaa sobaan hidhaan waggaa 20 itti murtaa’e bilisa bahuuf
Aadde Azaalach Beetaa ‘nama ajjeesterta’ jedhamuun ragaa sobaatin hidhaan waggaa 20 itti murtaa’ee waggoota shan darbanif hidhaarra turaniiru.
Haata’u malee, shamarreen ajjeefamteerti jedhamte lubbuun argamusheetin waggoota shanii olif hidhaarra kan jiran Aadde Azaalach yakkaraa bilisa ta’uunsaanii mirkanaa’era.
Waggoota shan dura A L I bara 2007 ture naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaatti jiraattuu aanaa Moojaafi Wadaraa kan ta’an Aadde Azaalach Beetaa “bara 2006tti intala buddeenaa keessan ajjeestaniirtu” jedhamanii to’annoo jala oolan.
“Wayita to’annoo jala ooltee qorannoof gara waajjira poolisii geeffamtu uummatni ‘nuf yaa ajjeefamtu. Tuni intalashee kan ajjeefte cubbamtuudha. Gadhiisaa nuti yaa ajjeefnu’ jechaa ture.
Kuni miidiyaadhaanis darbeera,” jedhan naannoo Amaaraatti ogeessa sab-qunnamtii Qajeelcha Manneen Sirreessaa Godina Shawaa Kaabaa kan ta’an Komaandar Dabbaba Makuriyaa.
Ajjeechaa hin raawwatamneefi ragaalee sobaa…
Aadde Azaalach Beetaa abbaa warraa isaaniifi ijoollee abbaa warraa isaanii sadii waliin jiraachaa turan.
Haata’u malee, abbaan warraa isaanii waggoota kudhanif wajjin jiraatan du’aan boqatanii booda ijoollee buddeenaa isaanii sadii walin walitti dhufeenyi isaanii hammaachaa dhufe.
Bara 2006 guyyaa ajjeechaan itti raawwatameera jedhamettis Aadde Azaalach fi intala buddeenaa isaanii gidduutti waldhabdeen uumame.
“Waldhabdee sana booda intalittin mana sanaa baddee deemte. Aadde Azaalachis intalittiin baduusheefi akka ishee barbaadanif eessumman isheetti himanis isaan garuu ishee hin barbaadne,” jedhan Komaandar Dabbaba.
Sana boodas intalli buddeenaa Aadde Azaalach baddeerti erga jedhamtee waggaa tokko booda, bara 2007 poolisiin aanichaa Aadde Azaalach Beetaa to’annoo jala oolchun qorannoo taasisuu eegale.
“Aadde Azaalach intala abbaa warraasaanii ajjeestee mana fincaanii keessatti gatteerti” kan jedhu immoo yakka ittin shakkamanii qorannoon irratti taasifamedha.
Haaluma kanaan sakatta’iinsa poolisiin mana fincaanii qe’ee Aadde Azaalach keessatti taasisen yunifoormiin mana barumsaa shamarree ajjeefamteerti jedhameefi rifeensi namaa argame.
Wayita Aadde Azaalach ajjeechaa namaatin shakkamanii to’annoo jala oolanitti uummatni magaalaa Moojaafi Wadaraa hiriira bahuun akka ajjeefaman gaafatee ture.
“Wayita to’annoo jala ooltee qorannoof gara waajjira poolisii geeffamtu uummatni ‘nuf yaa ajjeefamtu. Tuni intalashee kan ajjeefte cuubbamtuudha. Gadhiisaa nuti yaa ajjeefnu’ jechaa ture. Kuni miidiyaadhaanis darbeera,” jedhan Komaandar Dabbabaan.
Haata’u malee, Aadde Azaalach gochicha akka hin raawwanne boo’aa dubbataa akka turan Komaandar Dabbabaan ni himu.
Adeemsa falmii mana murtii godina Shawaa Kaabaatti taasifameen ragaaleen namootaa Aadde Azaalach intala buddeenaa isaanii ajjeesuu isaanii ragaa bahan.
Manni Murtii godina Shawaa Kaabaas ragaalee namootaafi sanadaa poolisii erga ilaaleen booda Aadde Azaalach ajjeechaa raawwataniiru jechuun A L I baruma 2007 hidhaa waggaa 20 irratti murteesse.
Dubartiin “ajjeefamte” lubbuun argamte…
Aadde Azaalach waggoota shanii olif hidhamanii erga turanii booda ji’a tokko dura A L I Guraandhala bara 2013 dubartiin A L I bara 2006 Aadde Azaalach Beetaan ajjeefamteerti jedhamte mana firoottan isheetti mul’atte.
Dubartiin waggoota jaha dura ajjeefamuunshee himame Naannoo Saba, Sablammootaafi Ummattoota Kibbaa turtee akka deebite himame.
Odeeffannoo kana akkuma dhagahanin mana murtii waliigalaa naannoo Amaaraafi waajjira haqaaf xalayaa barreessuu isaanii kan himan ogeessi qunnamtii ummataa Qajeelcha Manneen Sirreessaa Godina Shawaa Kaabaa Komaandar Dabbabaa Makuriyaa, qaamolee mootummaa dhimmichi ilaallatun hojiin lubbuun jiraachuu shamarree duuterti jedhamtee mirkaneessuu hojjetamuu himan.
“Dubartittiin lubbuun jiraachuushee jecha namoota 19 fudhachuudhaan, akkasumas maatinshee ‘intala keenya arganneerra’ jechuun mirkaneessaniiru.
Abbaan Alangaa godinaas, ‘intalti duute jedhamte lubbuun argamusheetin balleessaa malee kan hidhamte Aadde Azaalach Beetaa akkaataa qajeelfama dhiifamaa hidhamtootaan akka hiikamtu’ jechuun xalayaa nuuf barreesse,” jedhan.
Ragaa sobaan ajjeechaa namaatin himatamanii waggoota shanii oliif hidhaarra kan jiran Aadde Azaalach, yeroo ammaa yakkicharraa bilisa ta’uunsaanii yeroo baramu miira walmakaa keessa akka jiranis himu.
“Ammallee imimmaan dhiigaa boo’aa jirti,” jechuun himu anga’aan kun.
Qajeelchi Manneen Sirreessaa Godina Shawaa Kaabaa Aadde Azaalach Beetaa yakka malee hidhaarra jiraachusaaniifi akka gadhiifamanif boordii dhiifamaa naannichaaf xalayaa barreessuu isaa Komaandar Dabbabaa Makuriyaa BBCtti himaniiru.
Haata’u malee, Aadde Azaalach akka hiikkamanif boordii dhiifamaa naannichaarraa xalayaan deebii akka hin barreeffamnef himan.
“Boordiin dhiifamaa isheedhaaf qofa walitti qabamuu hin danda’u. Ji’a Fulbaanaaf yoo ishee qopheessitan malee waan ammatti furru miti jechuun boordiin dhiifamaa deebii nuf laate.
Gidduu kanatti haqni jal’ataa akka jirun sitti hima. Isheenis balleessaa malee mana sirreessaa jirti. Dhimmichi baay’ee nama gaddisiisa,” jedhan.
Namootni ragaa sobaatin irratti murtaa’ee hidhaarra jiran yeroo eeganii hidhamtoota biroo wajjiin dhiifamaan bahumoo battala balleessaa akka hin qabne barametti hiikamuu qabu kan jedhu, labsiin ifatti wanti kaa’e jiraachuu dhabuunsaa rakkoo ta’uu Komaandar Dabbabaan himaniiru.
Itoophiyaa dabalatee biyyoota addunyaa garagaraatti namoonni himata dogoggoraan ganna hedduu hidhamanii bahuun waan haarayaa miti.
Dhimmoota akkasii keessaa bara 2019 keessa Ameerikaatti namtichi Kaalifoorniyaa himannaa sobaatiin waggoota 38’f erga hidhamee booda beenyaa $ miiliyoona 21 kaffalameef.
Kireeg Koolii, maanguddoon ganna 71 yoo ta’an, Ameerikaa bulchiinsa Kaaliforniyaatti bara 1978 hiriyaasaa duraaniifi ilmasaanii ajjeesan jedhamuun itti murteeffame.
Ragaa qo’annoo qaccee sanyii ykn DNA gaggeeffameen bara 2017tti mana hidhaatii bahe.
Baruma walfakkaatu keessaa Awustiraaliyaatti, namtichi poolisii gameessa ajjeefteetta jedhamuun dogoggoraan waggaa 19 hidhaman beenyaa doolaara miiliyoona 7 argataniiru.
Lammiin Awustiraaliyaa David Eastman bara 1995tti ture ajjeechaa Colin Winchester- Koomishinarii Poolisii Federaalaan shakkamanii hidhaan umurii guutuu kan irratti murtaa’e.
‘Pireezidantiin Chaad Idriss Deby waraana gubbaattilubbuu dhaban’ waraana biyyattii